सेखी झार्ने होडबाजी बन्द गर नेताहरु !
राजनीति सरासर अघि बढेको भए यतिबेला नयाँ सरकारले शासनको बागडोर समाईसकेको हुनुपर्ने थियो । तर विडम्वना,निर्वाचन परिणाम समेत सार्बजनिक नभैसकेको अवस्थामा देशको राजनीति गुजुल्टिएर बसेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सकिएपछि संसदको अधिवेशन सुरु भएर नयाँ सरकारले पदभार लिने आम अपेक्षा विपरित राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन बाँकी रहेकाले राजनीति गुजुल्टो परेको देखिएको छ। संविधान र कानूनी प्रावधान एकातिर र राजनीतिक खिचातानी अर्कोतिर भएर झन अन्योल छाउँदै गएको छ।
यसरी राजनीति तुसारो झैं जमेपछि निर्वाचनमा प्रकट भएको जोश र मतदातामा देखिएको हौसला समेत कठांग्रिन पुगेको छ। तर विस्मयको कुरा के छ भने प्रमुख राजनीतिक दलहरु गुजुल्टिएको राजनीति फुकाएर अघि बढ्न मार्ग प्रशस्त गर्नेभन्दा पनि परस्पर दोषारोप गर्ने परम्रागत बानीकै शिकार भैरहेका छन् । फाट्टफुट्ट बाहेक राजनीतिक दलहरुवीच संवाद नहुनु र गतिरोधका कारण भन्दै मनगढन्ते तर्कहरु दोहोर्याईरहनुले सर्बत्र निराशा बढाउँदै लगेको छ ।
निर्वाचनमा बहुमत या दुईतिहाई नै दावी गरिरहेका बाम गठबन्धनका नेताहरुको आपसी संशययुक्त अभिव्यक्ति,पार्टी एकता पहिले कि सरकार गठन भन्नेमा आईरहेका अन्योलपूर्ण बिचारहरु हेर्दा राजनीतिले सहज निकास पाईहाल्ने देखिँदैन।
यसैवीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वाम गठबन्धनले नयाँ प्रधानमन्त्रीको टुंगो नगरेकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्न कठिन भएको तर्क गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिमको दौडाहामा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले वाम गठबन्धनभित्रकै किचलोका कारण सत्ता हस्तान्तरणमा ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भनेर अहिलेसम्म वाम गठबन्धनले टुंगो नलगाएकोले आफू सत्ता हस्तान्तरण गर्नका लागि जतिसुकै आतुर भए पनि संभव नभएको तर्क गरेका छन्। उनले बाम गठबन्धनतिर प्रश्न तेस्र्याउँदै भनेका छन् - म सरकारको साँचो कसलाई बुझाऊँ ?
यसरी प्रमुख दल र तिनका मुखियाहरु नै अन्योल बढाउन सक्रिय देखिन्छन्।
तर अब तर्कवितर्क गरेर एकअर्काको सेखी झार्ने होडबाजी गरिरहनु भन्दा पनि यथाशिघ्र राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नतर्फ प्रमुख नेताहरुको ध्यान जानु जरुरी छ। निर्वाचन पछिको जनमत हिजोको जस्तै मात्र छैन किनभने यसपटक निर्णायक भूमिकामा रहेको युवा पुस्ताले राजनीतिक अन्योल चिर्नका लागि मतदान गरेको थियो।
अब पनि नेताहरु बिगतमा झैं जनतालाई अल्मल्याएर सत्तास्वार्थमा लिप्त हुन खोज्छन् भने जनता हातमा दही जमाएर बस्ने छैनन्। जालझेलको जमाना गयो अब स्पष्ट मार्गचित्र र उन्नतिको भरपर्दो खाकामा कम्मर कसेर काम गर्ने नेता वा दलमात्र जनताका साथी हुनेछन्। बिगतमा झैं अलमल गरेर युवाहरुको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने कपटपूर्ण सोच कुनै नेता र दलहरुमा छ पनि भने उनीहरु पार्टी कार्यालयमा सीमित हुने खतरा छ। त्यसैले राजनीतिक गतिरोध यथाशिघ्र अन्त्य गर्न कम्मर कस्नु नै नेताहरुको एकमात्र एजेन्डा हो ।
२०७४ पौष ३० आइतबार १६:३८:०० मा प्रकाशित